Egwuregwu Mahjong kacha mma 5 maka gam akporo | Androidsis
Egwuregwu 5 kacha mma mahjong maka gam akporo
Otu egwuregwu bọọlụ China kacha ewu ewu nke jisiri ike gafere ókèala ala ya ma gbasaa gburugburu ụwa bụ mahjong. A na -egwu egwuregwu a nke na ọ bụ ihe masịrị ọtụtụ nde mmadụ, na -adị ọ bụghị naanị n'ụzọ anụ ahụ, kamakwa n'ọtụtụ mobiles na ọbụna kọmputa na consoles. Ọ bụ ya mere ọ dị na gam akporo, ọ bụghị naanị site n'otu egwuregwu, kama site na ọtụtụ, n'agbanyeghị na ugbu a anyị na -ekwu maka ndị kacha mma achọtara na Storelọ Ahịa Play.
Ebe a anyị na -anakọta egwuregwu 5 kacha mma mahjong maka gam akporo. Ha niile nweere onwe ha, n'otu oge ahụ, otu n'ime ndị kacha ebudatara na ndị a ma ama na ụlọ ahịa.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ egwuregwu mahjong kacha mma maka ekwentị gam akporo. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
2 Mahjong Solitaire: Omuma
4 Emperor nke Mahjong Tokens
5 Mahjong Deluxe efu
Iji malite mkpokọta mkpokọta a n'ụkwụ aka nri, anyị nwere Mahjong Titan, egwuregwu achịkọbarala ihe karịrị nde iri na nbudata na Storelọ Ahịa Play maka ịbụ otu n'ime ihe na -atọ ụtọ na otu n'ime ndị nwere atụmatụ mahjong kacha. Ọ na -abịa na ihe dị ka bọọdụ mahjong 10 na egwuregwu mgbagwoju anya iji kpọọ. Ọzọkwa, ịgbakwunye, enwere bọọdụ ọhụrụ kwa ụbọchị!
Isiokwu dị mfe: ị ga -eme otu ụzọ taịl ị chọtara, iji kpochapụ ha na bọọdụ. Iwu ndị a dị mfe, yabụ na mgbe mahjong bụ egwuregwu ị ga -echebara echiche, ọ dị mfe igwu egwu, na -enwekwa ahụ iru ala na ihe na -atọ ụtọ, dị mma maka ịnọ naanị mgbe oge ichere ma ọ bụ izu ike.
N'aka nke ọzọ, Mahjong Titan nwere nnukwu taịl 8 na nzụlite 12 dị iche iche. Na mgbakwunye, ọ kacha mma ka a kpọọ ya kwụ ọtọ na eserese ya dị na nkọwa dị elu (HD na 1080p), na -eme ahụmịhe egwuregwu kachasị elu. Enwekwara ọtụtụ ebumnuche, ebumnuche na mmezu nke a ga -eme nke na -eme ka ihe ịma aka nke imepụta bọọdụ mahjong sie ike, mana n'otu oge ahụ na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ karị.
Mahjong Solitaire: Omuma
Ekwela ka aha ahụ na -agbagwoju gị anya. Agbanyeghị na anyị na bọọdụ kpochapụwo na -eche egwuregwu mahjong ihu, ọ bụkwa na-abịa na bọọdụ ndị nwere echiche nwere ọmarịcha ụdị, mmetụta na eserese; nke ahụ bụ ihe na -akọwa Mahjong Solitaire: Omuma.
N'ime egwuregwu a, ị ga -ejikọ taịl niile, iji kpochapụ ha wee bụrụ onye mmeri na -enweghị mgbagha na egwuregwu ọ bụla. Were oge gị, chee echiche, chọọ ma nyocha. Na Mahjong Solitaire: Omuma ọ bụ naanị gị na bọọdụ, ọ bụghịzi. Ị nwere karịa ọkwa 180, ha niile nwere bọọdụ ahaziri n'ụzọ dị iche iche iji mee ihe ọ bụla dị egwu n'oge na -adịghị anya.
Ọzọkwa, nwere ike igwu offline, yabụ na ọ zuru oke maka ịpụ na njem na ebe enweghị njikọ Wi-Fi, ma ọ bụ ngwugwu data mkpanaka dị. Ọ bụkwa otu n'ime ama ama na egwu kacha ewu ewu, yana ihe karịrị nde nde 10 ebudatara na nbudata kwesịrị kpakpando 4.6.
Aha ya dị mfe, na -enweghị mgbakwunye, yana otu egwuregwu: Mahjong. Egwuregwu bọọlụ a na -eri ahụ na nnukwu egwuregwu maka gam akporo, dịkwa ka ndị ọzọ nọ na ndepụta a, na -abịa na bọọdụ nwere ụdị na ụdị dị iche iche, nke na -eme egwuregwu ahụ obi ụtọ na ọkwa ọ bụla na oge niile.
Taipei, dị ka ụfọdụ na -akpọ Mahjong, nwere njikwa dị mfe ma dị mfe igwu egwu, mana maka ndị na -amaghị ka esi egwu ya, enwere nkuzi nkuzi maka ndị mbido na egwuregwu a. Kedu ihe ọzọ, na -abịa na egwuregwu mgbagwoju anya na -akparaghị ókè maka ọrụ onye nrụpụta bọọdụ o nwere. N'aka nke ya, taịl nile dị na bọọdụ ahụ dị na 3D ma nwee mmetụta pụrụ iche, eserese na eserese.
Developer: Mgbasa ozi Maple
Emperor nke Mahjong Tokens
N'ime egwuregwu a, ị gaghị enwe ike igwu mahjong ma nwee anụrị mgbe ị na -eme ya, kamakwa ị ga -enwe ike ịga Rome oge ochie wee mara ihe oge dị ka n'oge ahụ. Obere obodo nọ na nsogbu, ụzọ gị iji nyere ya aka bụ site n'ịkpọ mahjong na iti ọkwa niile enwere; n'ụzọ dị otu a, ị nwere ike mee ka ọ too. Akụkọ a na -adọrọ mmasị ma na -adọrọ mmasị, yabụ na ọ bụghị naanị na ị ga -ebi ya, mana ka ị na -eme ya, ị ga -ezutekwa ndị odide dị iche iche, nke ọ bụla nwere mmụọ karịa ibe ya.
Akụkọ banyere Tiles nke Mahjong Tiles juputara na ntụgharị na atụghị anya ya, nakwa na ọ na -emebikwa omenala Mediterranean nke Rome oge ochie. N'ebe a, Cassius bụ onye ọjọọ nke mere ka obere obodo Rome, nke nọ ọdụ n'ebe dị anya, tie ya ihe. Ị ga -enyere aka wughachi ya wee mee ka o buru ibu karịa ka ọ dịbu. Ka ị na -ejikwa dozie bọọdụ mahjong niile na -abịara gị, kwado ndị bi na mkpebi siri ike ka ha wughachi obodo ha wee nweta mmezu na ngwaọrụ bara uru iji mee ya.
Mahjong Deluxe efu
Iji mechaa akwụkwọ mkpokọta a gbasara egwuregwu mahjong kacha mma maka gam akporo, anyị nwere Mahjong Deluxe Free, aha ọzọ nwere ọtụtụ bọọdụ egwuregwu bọọlụ China a ma ama, nwere ọtụtụ ọkwa iji merie ma mezue. Egwuregwu a na -abịa na bọọdụ karịrị 880 nwere ọgbakọ tile dị iche iche ịrụ mgbe egwu ezumike egwu dị jụụ na -akpọ. Ọzọkwa, dị ka mgbakwunye, ọ na -abịa na akwụkwọ ahụaja 12 dị maka ịhọrọ ma gbanwee mgbe ọ bụla ịchọrọ. Ọ na -abịa na akwụkwọ ahụaja ekeresimesi 4 nke, mgbe ahọpụtara, kpọọ egwu ekeresimesi.
Ma ọ bụghị ya, ọ bụ egwuregwu nwere ọtụtụ atụmatụ bọọdụ, ha niile pụrụ iche ma na -atọ ụtọ ịgafe oge.
Developer: EnsenaSoft, SA de CV
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu 5 kacha mma mahjong maka gam akporo
Egwuregwu 5 kacha mma maka ndị egwuregwu abụọ n'otu ekwentị gam akporo